प्रोफाइल/स्टार्टअप स्टोरी Archives - Page6of7- Living with ICT
Home / प्रोफाइल/स्टार्टअप स्टोरी (page 6)
कृषीलाइ आधुनिकरण गर्दै ‘क्रिएटिङ स्माइल्स’
सम्भवत नेपालमा बनेका मोवाइल एप्लिकेशनहरु मध्ये धेरै ठाउमा धेरै पटक अवार्ड र राम्रै रकम जितेको एप हो ‘आइसिटी फर एग्रिकल्चर’ । भर्खरै एनसेलको एप क्याम्पमा पनि सर्वोकृष्ट भई ७ लाख ५० हजारको पुरस्कार यसले प्राप्त गरेको छ । यहि एप्सका सस्थापक र निमार्ताहरुको सस्था हो ‘क्रिएटिभ स्माइल्स’ । लिभिङ विथ आइसिटीले दोश्रो वार्षिक उत्सवको अवसरमा २० उत्कृष्ट स्र्टाअप कम्पनीहरुको प्रोफाइल …
सफ्टवेयरको क्वालिटी मेजर गर्दै ‘एमिनेन्स वेज’
एमिनेन्स वेज सफ्टवेयर क्वालिटीको क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालको एक्लो आइटी कम्पनी हो । नेपालमा सफ्टवेयर विकास कम्पनी बढिरहेका छन्, तर उत्पादित सफ्टवेयर क्वालिटीयुक्त बनाउनेतर्फ कसैको चासो बढेको पाइँदैन । अधिकांश आइटी ग्र्याजुएटहरु पनि डेभलपर बन्ने सपना देख्छन् । सफ्टवेयर क्वालिटी टेस्टिङको स्कोपबारे कमैलाई मात्र थाहा छ । यस्तो अवस्थामा क्वालिटी आइटी सोलुसन दिने लक्ष्यका साथ मार्च, २०१३ मा एमिनेन्स वेजको …
डिजाइनिङमा अब्बल ठहरिदैँ काजी स्टुडियो
एब्रोड क्रेज । युवापुस्तामा सबैभन्दा बढी चर्चा हुने विषय । बहाना सबैको उही– नेपालमा भविष्य नै छैन । अवसरको खोजीमा विदेश दौडने नेपालीको संख्या झन्झनै बढ्दो छ । उतै लाइफ सेटल गर्न सके त महान् सफलता ठान्ने जमातमध्य एउटा जोडी अपवाद छ । कृती शाक्य र मनिष श्रेष्ठ अमेरिकामा सँगै डिजाइनिङ कोर्श गर्थे । विज्ञापन एजेन्सीमा इन्टेरिक्टिभ डिजाइन काम पनि …
आन्टरप्रेनियरशिपको फूल फुलाउँदै ‘बिरुवा’
सन् २००० सालमा अमेरिका गएका विधान राणालाई फेरि नेपालमै फर्की बिजनेश गर्छु भन्ने लागेकै थिएन । परिवार नै उतै भएपछि उनले आफ्नो भविष्य अमेरिकामै बुनिरहेका हुन्थे । विट्टकर एशोसिएट्स नामको कम्पनीमा मार्केटिङ कन्सल्टेन्टका रूपमा काम गर्ने उनले त्यहाँको लोकल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एजेन्सीसँग मिलेर काम गरिरहेका थिए । त्यति नै बेला नेपालमा भने दोस्रो जनआन्दोलन उत्कर्षमा थियो । यहाँका साथीले देशप्रति …
भेस्टको अनलाइन स्टोर : थ्रेडपेन्ट्स
जमाना टेक्नोलोजीको हो । अनलाइन चाहने र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेको भिडमात्रै छैन यहाँ, व्यस्त दैनिकीमा अब घरमै बसीबसी रोजाइका सामान मगाउने र किन्न चाहने नेपालीहरु पनि बढ्दैछन् । यही भिडमा थ्रेडपेन्ट्स जन्मियो, जसले युवाहरुका फरक फरक रोजाइलाई अनलाइनबाटै किन्ने सपना पूरा गर्दैछ । ३० डिसेम्बर, २०१२ मा ह्वाइटस्पेस प्रालिका रुपमा दर्ता भएको यो अनलाइन स्टोरले एक वर्ष पार गरेको …
कथा र व्यथा विश्वास ढकालको
Feb 3, 2014	1
नेपालमा आइटी इनोभेसनका हिरो सपना कसले देख्दैन र ! फरक यत्ति हो अरूले जीवनमा पटकपटक सपना देख्छन् । तर, उनले सधैं एउटै सपना देखे । अनि कहिल्यै सोचिराखेनन्, बरु काममा रमाइरहे । नेपालको आइटी क्षेत्रलाईविश्वसामु परिचित गराउने चाहना जोकोहीले नराख्न सक्छन्, उनले राखे । उनै सृजनशील व्यक्तित्व हुन् विश्वास ढकाल । नेपालले पनिनयाँ सफ्ट्वेयर बनाउँछ अनि बेच्छ र ? भन्नेजस्ता …
सञ्जय गोल्छाको कथा र व्यथा
‘कुनै पनि काममा सफलता हासिल गर्नुछ भने त्यसको शुरुवात शुन्यदेखि गर्नुपर्छ। शुन्यदेखि राम्रो , राम्रोदेखि झन राम्रोगर्दै त्यो सर्वोत्तमलाई दिगो बनाउन सक्नुपर्छ।’ विचार नै उनको फरक छ । भन्छन्,‘सफल हुन त आफ्नै इनोभेसन र शैली हुनुपर्छ। ’ खाद्यमा बिस्कुटदेखि आइटीमा एप्पलका प्राडक्ट सम्मको समेत व्यापार गर्न उनले भ्याएका छन्। आइटी विजनेशमा अग्रस्थानमै छन् भन्दा पनि फरक नपर्ला । उनी देशबाहिर …
एक युवाको चाहनामा विश्वस्तर कम्पनीको परिकल्पना: ब्रेनडिजिट
Jan 31, 2014	1
युथ सक्सेस स्टोरी सफल हुनको लागि कुनै नया काम नै गरिरहनु पर्दैन, त्यहि कामलाई नयाँ ढंगले गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने भनाईको तात्पर्यसँग मेलखाने गरि नेपालभित्रै केहि युवाहरुले नया ढंगले काम गरि सफल भएका छन। आइसिटीको क्षेत्रमा यस्ता दर्जनौ कम्पनीहरु छन, जसले आफ्नै देशभित्र आन्टरप्रिनर्ससिपको विकास गरेर सफल पनि भएका छन् । देशको कहालिलाग्दो राजनैतिक अवस्थाका वाबजुद पनि सफल हुन काम गरिरहनुपर्छ …
करुण थापा, वरिष्ठ एनिमेटर सिइयो मन्त्र नेटवर्क प्रा.लि कोही कोही मानिस स्वदेशमा केही गर्न सकिदैन भनेर विदेश पलायन हुन्छन् त कोही कोही जे गर्नुपर्छ स्वदेशमै गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् । झन हाम्रो देशमा त अलिकति शिक्षित र सक्षम छु भन्नेहरु विदेशिने गरेको तितो यथार्थ हामीकंहा छ । तर अवसर आउँदा पनि अस्वीकार गरी आफ्नै देशमा केही गर्छु …
एक रुपैयाँले बनायो नेपालको पहिलो कम्प्युटर अपरेटर
Mar 12, 2013	2
नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त २००७ साल जेठ २ गते पर्वत जिल्लाको सेउदास भन्ने ठाउँमा जन्मिएका नीलकण्ठ उप्रेतीले जीवनमा हरेक मोडको परिस्थिति सामना गरेका छन् । पर्वत जिल्लाको फलेबासको भगवानी विद्यापीठमा स्कुले जीवन बिताएका उप्रेतीले चितवनको अरुणोदय माविबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए । २०२५ सालमा दोस्रो श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेर चितवनको वीरेन्द्र बहुमुखी कलेजमा आइए सकेपछि उनी काठमाडौं प्रवेश गरेका थिए …